China TYD01-01 Laboratory Syringe Pump fekitori uye vatengesi |Tungamira
Nhamba huru yeChannels:
● Lead Fluid TYD01-01inotora yakasanganiswa tafura modhi dhizaini, 4.3 inch HD LCD touch screen kuratidza uye kushanda,inogona kuunganidza sirinji imwe yepurasitiki kana gasi yakasimba sirinji, saizi yesirinji10μL～60mL, kuyerera kwemhando 0.184nL/min～83.318mL/min.
● Shandisa yakanakisa control system uye yakanyatso mashandiro emuchina, mutsara kufamba kwakaringana＜± 0.35%, akawandamamodhi ekushanda anowanikwa, anesimba basa, akanyatsokodzera yakakwira chaiyo micro-kutapurirana kwemvura dzakasiyanamukutsvakurudza kwesayenzi uye kuedza.
● Drive screw fixation isuine simba rakakwirira rendege inotakura, zvichienzaniswa neyekare mhangura sleeve kutakura, sevhisiHupenyu hwe screw hwakavandudzwa zvakanyanya, uye iko kurongeka kwakakwira.
● Yakasimba Anti-EMI mutambice, inoenderera uye yakagadzikana kushanda pasi peyakakwira voltage electrostatic munda.
● RS485 kutaurirana, kuenderana MODBUS protocol, automation control system inogona kuumbwakomputa, PLC, single chip komputa etc. akawanda anotambira makomputa.
• Inogona kuisa jekiseni imwe yepurasitiki kana gasijekiseni yakasimba
• Mhando yekushanda mode
• Ruvara kubata sikirini, nyoret oparesheni
• Tsigira chidzitiro kukiya, kiyi mbeveve operation
• Bhatani rine chiratidzo chechiedza, clearly working state
• Tsigira zvakasiyana siyanasirinji, gadzirisa sirinji
• Sirinji kudziviriran uye traffic jam alarm
• RS485 communication, tsigira iyo MODBUS protocol
• Chiratidzo chekunzekudzora kutanga-kumira uye nzira
• Wide range voltage power input
• Izere simbi shell
Zvinotevera: BT301L Yakangwara Inoyerera Peristaltic Pump
Woke mode pinza, bvisa, pinza / bvisa, bvisa / pinza, inoenderera mod
Kurohwa kwepombi 110mm
Advance per microstep 0.156μm/μdanho
Linear kumhanya 1μm/min～150mm/min
Linear resolution 1μm/min
Linear kufamba kwakarurama kukanganisa <± 0.35% (> 30% yepombi sitiroko)
Max akayera simba remutsetse >16kgf
Thrust regulation 1～100% inogadziriswa inogadziriswa
Sirinji saizi 10μL～60mL
Sirinji kusarudzwa yakavakirwa-mukati mavagadziri makuru, iyo huru modhi sirinji yekusarudza, Inogona kushandisa sirinji yechinyakare, yakananga yekupinza sirinji saizi uye dhayamita
Flow range Flow calibration0.184nL/min～83.318mL/min
Flow calibration kuburikidza nenzira yecalibration kuti uwane huwandu hwakakwana hwemvura
Display mode 4.3-inch color LCD, ine chidzitiro chiratidziro uye vhoriyamu yekuwedzerwa, yakasara yemvura vhoriyamu, kuyerera, mashandiro ekuratidzira maitiro ekushanda, kutungamira, kududzirwa kwesirinji, Animation kuratidza maitiro ekushanda.
Operation mode touch screen + zvakajairika basa makiyi
Kudzima ndangariro kuchengetedza ma parameter ekumhanya otomatiki
Function imbomira uye mira, muromo wetipi, iyo yekukiya paramita, nekukurumidza kumberi uye dzokera nekukurumidza, ratidza kupenya kugadzirisa.
State signal kubuda 1 mugwagwa wekutanga-kumira chimiro, 1 nzira yenzira
Dzora kuisa chiratidzo 1 mugwagwa iyo inodonha inokonzeresa inotanga uye 1 nzira iyo inodonha inokonzeresa inomira.
Kukurukurirana interface RS485, MODUS protocol
Environment tembiricha 5℃ 40 ℃, hunyoro hunyoro <80%
Reference Tafura yeSiringe Zvinotsanangurwa uye Flow Rate
Sirinji saizi Sirinji ID(mm) Min flow rate (nl/min) Kuyerera kweMax (ml/min)
Pamusoro pekuyerera kweparameters inowanikwa nekushandisa silicone chubhu kuendesa mvura yakachena pasi peyakajairika tembiricha uye kumanikidzwa, mune chaiyo inoitwa neakananga zvinhu senge kudzvanywa, svikiro, etc. Pamusoro pekunongedza chete.
Lead Fluid TYD01-01 murabhoritari sirinji pombi ratidza vhidhiyo.
Kana iwe uchida vhidhiyo yedu, ndapota nyora kune youtube account.
TYD02-10 Murabhoritari Syring...
TYD02-04 Murabhoritari Syring...
TYD02-01 Sirinji yemurabhoritari...
TYD03-01 Murabhoritari sirinji...